वैकल्पिक राजमार्ग यसरी बन्दैँछ फटाफट ! | suryakhabar.com
Home देश वैकल्पिक राजमार्ग यसरी बन्दैँछ फटाफट !
on: ९ जेष्ठ २०७५, बुधबार १४:५१ In: देशTags: No Comments
लहान । राष्ट्रिय गौरवको योजना मानिएको सुनसरीको धरान–चतरा, गाईघाट–कटारी र सिन्धुली–हेटौँडा सडक आयोजनाको पूर्वी खण्ड निर्माण तीव्र रुपमा अघि बढेको छ ।
वैकल्पिक मार्गको निर्माणमा अवरोध नआए निर्धारित समयमै निमार्ण सम्पन्न हुने स्थानीयवासी बताउँछन् । आफ्नै घरआँगनमा राजमार्ग निर्माण शुरु भएसँगै स्थानीयवासी हर्षित छन् । राजमार्ग बनेपछि काठमाडौँसँग सहज यातायातको पहँच हुनेछ ।
यस्तो अवस्थामा भेटियो किशोरको शव
९ जेष्ठ २०७५, बुधबार १४:५१